Ogaden News Agency (ONA) – Jigjiga – sababaha ka dambeeyay afduubkii fashilmay iyo mustaqbalka
Jigjiga – sababaha ka dambeeyay afduubkii fashilmay iyo mustaqbalka
Posted by ONA Admin	/ February 19, 2013
Odayaashii ay damceen sirdoonka Itobiya inay ka afduubaan magaalada Nairobi waxay abuureen su’aalo badan oy isweydiinayaan dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha Kenya ama gaar ahaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalooyinka Kenya ee ka soo cararay cadaadiska iyo dhibaatada gumaysiga Itobiya uu ku hayo dadka shacabka ah iyagoo adeegsanaya maleesiyada loo yaqaano hawaarinta. Waxaan ka helnay Jigjiga akhbaaro muhiim ah oo intooda badan laga soo saaray xafiisyada iyo xuuraansiga dadka ka agdhow cabdi iley iyo kooxdiisa. Wararkaasi waxay muujinayaan intooda badan jahawareerka haysta cabdi iley iyo Jananada jooga Ogadenya ee ka iibiya dawladda dhexe beenta iyo riwaayadaha loo alifo.
Iskudayga in qof magaala dhex jooga gaar ahaan Nairobi la kaxaysto ama la afduubo, ma’aha arin u baahan maskax, waxay muujinaysaa un in dawladda isku daygaa samaynaysa ay ku fashilantay dagaalkii ay kula jirtay ururada hubaysan ama mucaaradka ah ee dalkeeda dhex jooga. Kalsoonidarada haysata ayay muujinaysaa dawladaasi oo si argagixisnimo ah ula dhaqmaysa shacabka iyo dawladaha jaarka la’ah.
Hadaan qodobkan dib ugu soo noqono, wararka naga soo gaadhay Jigjiga qaarkood ayaa waxay sheegayaan markuu soo galay Cabdi nuur (ninkii is-wasaqeeyay) inuu Cabdi iley ka gaday gumaysiga waxaa soo socda xubno kale oo JWXO ah taasoo Itobiya ay durbadiiba gaadhsiisay caalamka, gaar ahaan dawladaha daneeya arimaha Geeska Afrika, iyadoo loo dhigayo inay JWXO kala fadhido. Muddo ka dib waxaa cadaatay inay tahay waxba kama jiraan oo Cabdinuur oo kali ah uu noqday ninka Cabdi iley ku raacay reernimada sida ay cadeeyeen xogta nasoo gaadhay. Wuxuu Cabdi iley u sii diiwaan galiyey Itobiya in xubno JWXO ka tirsan ay ka danbeeyaan qorshaha Cabdinuur uu ku soo xarooday oy is ogyihiin imanna doonaan. Qorshaha Cabdi iley loo dajiyay ee hada soo baxday waxuu ahaa in rag la yaqaano oo JWXO ah laga soo afduubo Kenya ka dibna uu dawladda Itobiya uga dhigo xubnihii Cabdi nuur ka danbeeyey oo soo galay oy isku siyaasad ahaayeen. Sidoo kalena in nimanka la soo afduubay marka lakeeno lagu qasbo in ay mediayaha ka hadlaan oy yidhaahdaan waxaanu nahay xubnihii dastuurka qaatay ee uu Cabdi nuur sii sheegayey . Qorshaha la dajiyay oo sisahlan loo sheegay wuxuu ahaa, in lasoo afduubo xubno la yaqaano oo la keeno xadka Ogadenya, isagna uu xuduuda u sii dhigo dad soo kaxeeya oo gacanta ka soo galiya .
Qorshahaasi hadda way kashifantay , waxaana halkaa ku burburay qorshihii uu rabay Cabdi iley inuu ku buun-buuniyo Cabdinuur oo sidaa uu kaga badbaado dhaliilaha ku socda. Waxay intaa raaciyeen dadka nasoo gaadhsiiyay warkan inaan la odhan karin waa isku daygii ugu danbeeyey, sababtoo ah waxaa Itobiya laga gaday iyadana ay caalamka u sii gudbisay inay jiraan xubno ka mid ah G/Dhexe ama madaxda ururka oo taageeray Itobiya diyaarna u ah inay dasruurka qaataan oo hubka dhigaan shuruud la’aan, ka dib markii Itobiya lagu ceebeeyay sida dhalaanimada siyaasadeed ah ee wadahadalkii uga furmay labada garab ay u burburisay. Cabdi iley iyo Jananka ka mushtara dhiiga shacabka Ogadenya ayaa beentaa ka gaday dawladda dhexe.
Arimaha kale la soo xaqiijiyay waxaa ka mid ah kharashka loogu talagalay arimaha af-duubka ah ee Cabdinuur iyo koox ku xidhan loo xilsaaray oo la sheegayo inay tahay lacag badan oo gaadhaysa 2million oo Birta Itobiya ah, kharashkaas oo ilaa hadda aan wax guul ah lagu gaadhin, laguna gaadhi doonin, ayaa lagu hawlgalay.
Kolba inta daaha laga rogayo xogaha aan hayno la socda.